नेदरल्याण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय अपील वकीलहरू - Law & More
के तपाईं अदालतको भर्ती संग डिसेगराइ गर्नुहुन्छ? सम्पर्क गर्नुहोस् LAW & MORE!
यो सामान्य छ कि एक वा दुबै पक्ष आफ्नो केसको फैसलासँग असहमत छन्। के तपाईं अदालतको फैसलासँग असहमत हुनुहुन्छ? त्यसोभए त्यहाँ यस निर्णयलाई अपीलको अदालतमा अपील गर्न एक विकल्प छ। यद्यपि यो विकल्प नागरिक मामिलामा EU १,1,750० भन्दा कमको ब्याजको साथ लागू हुँदैन। के तपाईं अदालतको निर्णयसँग सहमत हुनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईं अझै अदालतमा कार्यवाहीमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। सबै पछि, तपाइँको समकक्षले अवश्य पनि अपील गर्ने निर्णय गर्न सक्दछ। अपीलको सम्भावना प्रोफेसरको डच सिभिल कोडको शीर्षक in मा नियमित छ। यो सम्भावना दुई घटनामा केस ह्यान्डल गर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ: पहिलो पटक सामान्यतया अदालतमा र त्यसपछि अपीलको अदालतमा। यो विश्वास गरिन्छ कि दुई मुद्दामा मुद्दा चलाउँदा न्यायको गुणस्तर, साथै न्यायको प्रशासनमा नागरिकहरूको विश्वास बढ्छ। अपीलको दुई महत्त्वपूर्ण कार्यहरू छन्: • नियन्त्रण समारोह। अपीलमा, अदालतलाई तपाइँको केसलाई फेरि र पूर्ण समीक्षा गर्न भन्नुहोस्। त्यसकारण अदालतले जाँच्दछ कि पहिले न्यायाधीशले तथ्यहरू सही तरिकाले स्थापित गरे, कानूनलाई सही रूपमा लागू गरे र उनले सही न्याय गरे कि छैन। यदि होईन भने, अदालतले पहिलो उदाहरण न्यायाधीशको फैसलालाई खारेज गर्नेछ। • पुन: अवसर। यो सम्भव छ कि तपाईंले गलत कानुनी आधारलाई पहिलो पटकमा छनौट गर्नुभयो, तपाईंको बयान पर्याप्त रूपले तयार गर्नुभएन वा तपाईंको वक्तव्यको लागि थोरै प्रमाण प्रदान गर्नुभएन। पूर्ण पुन: अवधारणाको सिद्धान्त त्यसैले अपीलको अदालतमा लागू हुन्छ। सबै तथ्यहरूलाई समीक्षाका लागि फेरि अदालतमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ मात्र होइन, अपील पार्टीको रूपमा तपाईंले पनि पहिलो पटकमा गरेका गल्तीहरूलाई सुधार्ने अवसर पाउनुहुनेछ। तपाईंको दावी बढाउन अपीलमा सम्भावना पनि छ।
अपीलको लागि अवधि यदि तपाइँ अदालतमा अपील प्रक्रियाको लागि छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले एक निश्चित अवधिमा अपील दर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यो अवधि को लम्बाई केस को प्रकार मा निर्भर गर्दछ। यदि फैसला एक नागरिक अदालत को एक निर्णय सम्बन्धित छ, तपाईं अपील दर्ता गर्न फैसला को मिति देखि तीन महिना छ। के तपाईंले पहिलो घटनामा सारांश कार्यवाहीसँग सम्झौता गर्नुपर्‍यो? त्यो अवस्थामा, अदालतमा अपील गर्न केवल चार हप्ताको अवधि लागू हुन्छ। के आपराधिक अदालतले तपाइँको मुद्दाको बारेमा छलफल गरेको थियो र न्याय गर्‍यो? त्यो अवस्थामा, तपाईंसँग अदालतमा अपील गर्ने निर्णय पछि दुई हप्ता मात्र छ। अपील सर्तहरू कानूनी निश्चितताका लागि सेवा प्रदान गर्ने हुनाले यी मितिहरू पनि कडाईका साथ पालन गर्नै पर्दछ। अपील अवधि एक सख्त अन्तिम म्याद छ। के यस अवधिको बीचमा कुनै पनि अपील फाइल गरिने छैन? त्यसोभए तपाईं ढिलो हुनुहुन्छ र यसकारण अस्वीकार्य। यो केवल असाधारण मामिलाहरूमा छ कि अपीलको लागि अन्तिम म्याद समाप्त भए पछि अपील फाइल गर्न सकिन्छ। यो केस हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, यदि ढिलो अपीलको कारण न्यायाधीशको आफ्नै गल्ती छ किनभने उसले पार्टीहरूलाई धेरै ढिलो आदेश पठायो।
प्रक्रिया अपीलको सन्दर्भमा, आधारभूत सिद्धान्त यो हो कि पहिलो उदाहरणको सम्बन्धमा अपील प्रक्रियामा पनि लागू हुन्छ। यसैले अपील उही फारममा सबनोइनासँग शुरू भयो र समान आवश्यक्ताहरूको साथ पहिलो पटकमा। यद्यपि अपीलको लागि मैदानहरू बताउन यो आवश्यक छैन। यी आधारहरू केवल उजूरी अनुसरण गरिएको उजूरीको बयानमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अपीलको लागि मैदानहरू सबै आधारहरू हुन् जुन अपीलकर्ताले अघिल्लो मुद्दामा अदालतको प्रतिस्पर्धा गरिएको फैसलालाई अलग राख्नुपर्दछ भन्ने तर्क गर्न अगाडि राख्नुपर्दछ। फैसलाको ती भागहरू जसको बिरूद्ध कुनै आधार तयार पारिएको छैन, कार्यान्वयनमा रहनेछ र अपीलमा छलफल गरिने छैन। यस तरीकाले अपीलमा बहस र यसैले कानुनी ब्याटेल सीमित हुन्छ। तसर्थ यो पहिलो कारण मा दिइएको फैसला मा एक तर्कयुक्त आपत्ति उठाउन महत्वपूर्ण छ। यो सन्दर्भमा यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि एक तथाकथित सामान्य आधार, जुन विवादको फैसलाको पूर्ण सीमासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य गर्दछ, सफल हुन सक्दैन र सफल हुँदैन। अर्को शब्दमा: अपील मैदानमा एक ठोस आपत्ति हुनुपर्दछ कि जुन अर्को पक्षलाई प्रतिवादको सन्दर्भमा स्पष्ट हुन्छ कि आपत्तिहरू के ठीक छन्। उजुरीहरूको बयान प्रतिरक्षाको बयान अनुसरण गर्दछ। यसको पक्षका लागि अपीलमा मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गरिएको फैसलाको बिरूद्ध अगाडि मैदान हाल्न र अपीलकर्ताले उजूरीको बयानलाई प्रतिक्रिया दिन सक्छ। उजुरीको बयान र रक्षा को बयान सामान्यतया अपील मा स्थिति को आदान प्रदान समाप्त। लिखित कागजातहरू आदानप्रदान पछि, यो सिद्धान्तमा अब नयाँ आधार प्रस्तुत गर्न अनुमति छैन, दावी बढाउनको लागि पनि होईन। यसैले यो तय गरिएको छ कि न्यायाधीशले अब अपीलको पक्षमा ध्यान दिन सक्दैन जुन अपील वा बचावको बयान पछि राखिएको छ। यो दावीको बृद्धि गर्न पनि लागू हुन्छ। यद्यपि अपवादको रूपमा पछि अर्को चरणमा पनि मैदान स्वीकार्य छ यदि अर्को पक्षले अनुमति दिएको छ भने यो गुनासो विवादको प्रकृतिबाट उत्पन्न हुन्छ वा लिखित कागजातहरू पेश गरिसकेपछि नयाँ घटना उत्पन्न भएको थियो। एक सुरूवात विन्दुको रूपमा, पहिलो पटकमा लिखित दौर सधैं जहिले अदालतमा सुनुवाई द्वारा अनुसरण गरिन्छ। अपीलमा यो सिद्धान्तलाई अपवाद छ: अदालत समक्ष सुनुवाई वैकल्पिक हो त्यसैले साधारण छैन। धेरै जसो केसहरू प्राय: अदालतले लिखित रूपमा समाधान गर्दछ। यद्यपि दुबै पक्षले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाईको लागि अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्छन्। यदि कुनै पक्ष अपीलको अदालत समक्ष सुनुवाई चाहन्छ भने अदालतले अनुमति दिनुपर्नेछ, विशेष परिस्थिति नभएसम्म यस हदसम्म, मुद्दा दायाँको मुद्दामा कानून बाँकी छ। अपीलमा कानूनी कार्यवाहीको अन्तिम चरण भनेको फैसला हो। यस निर्णयमा अपीलको अदालतले अदालतको अघिल्लो फैसला सही थियो वा थिएन भनेर संकेत गर्दछ। अभ्यासमा, दलहरूलाई अपीलको अदालतको अन्तिम निर्णयको सामना गर्न यसले छ महिना वा अधिक लिन सक्दछ। यदि पुनरावेदनकर्ताको आधारलाई समर्थन गर्छ भने अदालतले लडाईएको फैसलालाई पन्छाएर मुद्दा हाल्छ।
प्रशासनिक अदालतमा अपील के तपाईं प्रशासनिक अदालतको निर्णयसँग असहमत हुनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईं अपील पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जहाँसम्म, जब तपाईं प्रशासनिक कानूनको साथ व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, यो ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि त्यो अवस्थामा तपाईंले पहिले अन्य सर्तहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्नेछ। प्रशासनिक न्यायाधीशको फैसला घोषणा भएको समय देखि सामान्यतः six हप्ताहरू हुन्छन्, जसमा तपाईं अपील गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले अन्य उदाहरणहरूसँग पनि व्यवहार गर्नुपर्नेछ जुन तपाईं अपीलको सन्दर्भमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। कुन अदालतमा तपाईंले जानुपर्दछ त्यो केसको प्रकारमा निर्भर गर्दछ: security सामाजिक सुरक्षा र निजामती कर्मचारी कानून। केन्द्रीय अपील बोर्ड (CRVB) द्वारा अपीलमा सामाजिक सुरक्षा र निजामती कर्मचारी कानूनमा मुद्दाहरूको समाधान गरिन्छ। • आर्थिक प्रशासनिक कानून र अनुशासनात्मक न्याय। अन्यको सन्दर्भमा विषय, प्रतिस्पर्धा ऐन, हुलाक ऐन, कमोडिटी एक्ट र टेलिकम्युनिकेसन ऐन अपीलको लागि व्यवसाय अपील बोर्ड (CBb) द्वारा अपील गरीन्छ। m अध्यागमन कानून र अन्य मामिलाहरू। अन्य मुद्दा, अध्यागमन मामला सहित, राज्य काउन्सिल (ABRvS) को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार डिभिजन द्वारा अपील गरीएको छ।
अपील पछि सामान्यतया, पक्षहरू अपीलको अदालतको फैसलाको पालना गर्दछन् र त्यसैले तिनीहरूको मुद्दा अपीलमा तय हुन्छ। जे होस्, के तपाईं अपिलमा भएको अदालतको फैसलासँग असहमत हुनुहुन्छ? त्यसपछि अपीलको अदालतको फैसला पछि तीन महिनासम्म डच सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने विकल्प छ। यो विकल्प ABRvS, CRvB र CBb को निर्णयहरूमा लागू हुँदैन। सबै पछि, यी निकायहरूका बयानहरूले अन्तिम निर्णयहरू समावेश गर्दछ। त्यसकारण यी निर्णयहरूलाई चुनौती दिन सम्भव छैन। यदि cassation को सम्भावना अवस्थित छ भने, यो याद गर्नुपर्दछ कि त्यहाँ विवादको तथ्या assessment्क मूल्या assessment्कनको लागि कुनै ठाउँ छैन। का्यासेशनका लागि मैदानहरू पनि धेरै सीमित छन्। सबै भन्दा पछि, cassation मात्र insofar स्थापना गर्न सकिन्छ किनकि तल्लो अदालतले सही ढ correctly्गले लागू गरेको छैन। यो एक प्रक्रिया हो जुन वर्ष लिन र उच्च लागत समावेश गर्न सक्दछ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ कि सबै कुरा एक अपील प्रक्रियाबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। Law & More यससँग तपाईलाई मद्दत गर्न खुशी छ। जे भए पनि, अपील कुनै पनि क्षेत्राधिकारमा एक जटिल प्रक्रिया हो, प्राय: मुख्य चासोहरू। Law & More वकिलहरु दुबै आपराधिक, प्रशासनिक र नागरिक कानून मा विशेषज्ञ छन् र अपीलको कार्यवाहीमा सहयोग गर्न खुसी छन्। के तपाइँसँग अरू केहि प्रश्नहरू छन्? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More.